कोरोना बाट थप २ जनाको नि’धन, कोरोना बाट ज्या न गुमा`उनेको सं`ख्या १३ पुग्यो !!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/कोरोना बाट थप २ जनाको नि’धन, कोरोना बाट ज्या न गुमा`उनेको सं`ख्या १३ पुग्यो !!!
कोरोना बाट थप २ जनाको नि’धन, कोरोना बाट ज्या न गुमा`उनेको सं`ख्या १३ पुग्यो !!!
काठमान्डौ , नेपालमा कोरोना संक्र`मणबाट थप २ जनाको ज्या`न गएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका वडा नम्बर ३ निवासी ५८ वर्षीय पुरुषको कोरोनाभाइरस संक्र`मण बाट मृ’त्यु भएको पु`ष्टि भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रा`लयका अनुसार उनी द’म रो’गी रहेको र उनको जेठ २१ गते मृ’त्यु भएको हो ।
उनी सोही रो’गको सुर्खेतमा उपचार गराएर जेठ १९ गते डोल्पा फर्किएका थिए । त्यसपछि होम क्वारे`न्टाइनमा रहेका उनको २१ गते मृ’त्यु हुन पुगेको र मृ’त्यु पश्चात जेठ २२ गते स्वाब संकलन गरी परीक्षणका पठाइए`कोमा को`रोनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको देब`कोटाले बताए ।
त्यस्तै धनगडीकी एक जना महिलालाई पनि कोरोना बाट मृ’त्यु भएको देबकोटाले बताए । योसहित नेपालमा कोराना बाट मृ’त्यु हुनेको संख्या १३ पुगेको छ । उनको डा’यलासिसकै क्रममा जेठ २३ गते दिउँसो १२ बजे मृ’त्यु भएको हो। त्यसपछि स्वाब लिएर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। उनमा कोरोनाको कुनै लक्षण नभएको प्रवक्ता देवको`टाले जानकारी दिए।
नेपाल आइडल सिजन – ३ का एक सदस्यलाई कोरोना संक्र मण, सबै आइसोलेसनमा